SONSAF oo qabtay kulan Lagaga Hadlayay Sanduuq ay Britain iyo Denmark u sameeyeen Somaliland | Somaliland.Org
Kulankan ayaa mudadii uu socday lagaga wada hadlay adeegyada muhiimka ah ee loo baahan yahay in lagu fuliyo lacagtan.Agaasimaha Fulinta ee Dalada Sonsaf Md: Maxamed Axmed Muxumed oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in mudadii uu socday lagagag wada hadlay adeegyada ugu muhiimsan ee lagu fulin lahaa lacagta ku soo dhacda sanduuqan, agaasimuhu waxa kale oo uu ka hadlay kaalinta ay Sonsaf ka qaadatay kulankan.
Agaasimaha oo ka hadlaya kulankan ayaa waxa uu yidhi “kulankani waxa uu ku saabsanaa sanduuq loo sameeyey somaliland, sanduuqan oo ah markii ugu horaysay ee la sameeyo ama la abaabulo mid noociisa oo kale ah, sababta oo ah markii hore hay’addaha caalamiga ah ama kuwa wadaniga ah ayaa lacagaha loo dhiibi jiray.
Imika waxa la doonayaa in la sameeyo sanduuq gaara oo lagu shubo lacagta horu marineed iyada oo lacagtii ugu horaysay oo ah 25000000$(shanyo Labaatan Milyan oo doolar ah ) ay ku shubtay dawlada Denmark iyada oo la soo mariyey hay’adda u qaabilsan deeqaha ee la yidhaa Danidda,waxa kale sanduuqan lacag ku shubaysa bilaha soo socda dawlada ingiriiska iyada oo soo marinaysa hay’adda u qaabilsan deeqaha ee DFD.”
Agaasimaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in sanduuqan loogu tala galay in wax lagaga qabto adeegyada Aas-Aasiga u ah bulshada waxaanu yidhi “waxa loogu tala galay sanduuqan in adeegyada Aas-Aasiga ah ee somaliland wax lagaga qabto, kuwaas oo la xidhiidha qorshaha horu marineed ee somaliland.
Lacagahani maaha kuwii ay ina siinayeen wadamada yurub laakiin waa lacag ka khaasa.”
Agaasimaha oo ka hadlaya doorka ay dalada Sonsaf ka qaadatay kulankan ayaa waxa uu yidhi “doorka ay Sonsaaf ka ciyaartay waxa weeye inay iskugu yeedho dad badan,waxaana noo yimi bulshada somaliland qaybaheeda kala duwan oo muhiima kuwaas oo aanu doonaynay inay talo ka bixiyaan baahida ka jirta dalka iyo sida sanduuqa loo maamulayo iyo sidii ay lacagtani u noqon lahayd mid ka duwan tii ay hay’adduhu ay maamuli jireen kuwaas oo inta badan aan la garan sida ay ku baxayaan.Markaa waxaanu arkaynay inay aad muhiim u tahay in sanduuqan la sameeyo oo lacagaha lagu shubo walibana laga maamulo caasimada somaliland ee hargeysa.
Lacagtani maaha mid meel fog la dhigayo ee waa mid dalka gudihiisa taala, waa lacago la gaadhi karo taas oo lagaga maarmi karo lacagihii meelaha fog fog loo dooni jiray, waxyaalaha lagaga wada tashaday kulankan waxa ka mida in la sameeyo cidii maamuli lahayd sanduuqan kuwaas oo ay ku jiraan Dawlada, Ururada Aan Dawliga ahayn iyo wadamada deeqaha bixiya. Waxaana la doonayaa inay lacagtani noqoto mid la arko waxyaalaha lagu qabanayo taas oo ka duwanaan doonta tii ay hay’adduhu odhan jireen waxyaalahaas ayaanu ku qabanay ee hadana aan la arki jirin. Waxa la soo jeediyey baahiyo badan oo lagama maarmaan u ah in wax lagaga qabto lacagahan kuwaas oo ay ka mid tahay Wadooyinka, Xoolaha,Biyaha,Kaluunka,Waxbarashada iyo Caafimaadka.
Marka loo eego horu marka dalka talaabadani waxay noqonaysaa mid hore loo qaaday, waxaanu filaynaa inuu sanduuqani noqon doono mid wax ka tara baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka.”
Sidoo kale Agaasimuhu waxa uu sheegay in qodobada ka soo baxa shirkan loo gudbin doona wakiilo ka socda Hay’addaha dhinaca deeqaha u qaabilsan wadamadda Denmark iyo Ingiriiska kuwaas oo iyaguna qayb ka ah kulamadan lagaga tashanayo sidii loo maamuli lahaa sanduuqan.
Previous PostUrurka NASIYE Oo Cayimay xiliga uu qabsanayo shirweynahooda koowaadNext PostWasiirka Arrimaha dibadda oo dalka dib ugu soo laabtay	Blog